Ukwakha ipateni entsha yophuhliso Isinyithi esilungileyo kufuneka sisetyenziswe kwi "blade" -Udliwanondlebe noLuo Tiejun, usekela-Mongameli we-China Iron and Steel Association - China Foshan Hermes Steel
Ukwakha ipateni entsha yophuhliso Isinyithi esilungileyo kufuneka sisetyenziswe kwi "blade" -Udliwanondlebe noLuo Tiejun, Usekela-Mongameli we-China Iron and Steel Association
"Phantsi kwenkqubo entsha yophuhliso, umzi mveliso wentsimbi kufuneka ubambe amathuba amatsha kwixesha elizayo ukusuka kulungelelwaniso olutsha lonikezelo lwasekhaya kunye nemfuno kunye nokuthatha inxaxheba kwinqanaba eliphezulu lentsebenziswano kunye nokhuphiswano." U-Luo Tiejun, usekela-mongameli we-China Iron and Steel Association, utshilo kudliwanondlebe olukhethekileyo ne-Xinhua News Agency kutshanje. Ukuphuculwa kohlengahlengiso kwicala lokubonelela ngesicwangciso se-13 seSicwangciso seMinyaka esiHlanu siye samelana novavanyo loxinzelelo lonyaka okhethekileyo ka-2020. Umzi mveliso wentsimbi, omi kwindawo yokuqala yophuhliso, uza kuqhubeka ukwenza uhlengahlengiso kwaye ngokuthe ngcembe ukuphucula izakhono ezisisiseko zeshishini kunye nenqanaba lokuphucula ikhonkco lezamashishini. Thatha ubuchule bezenzululwazi kunye nobuchwephesha njengesiqalo sokuphucula umgangatho kunye nenqanaba lonikezelo, kwaye vumela intsimbi elungileyo isetyenziswe "kwi-blade".
“Bendingayilindelanga!” U-Luo Tiejun ukhumbule unyaka we-2020 odlulileyo, "Ndixhalabile ngenene ukuba ikomkhulu lenkampani liza kuqhekeka kwaye eli shishini lilahlekelwe yimali. Ngenxa yoko, akukho lahleko ngenyanga. Ingumcimbi nje wenzuzo engakanani. ”
Idatha yombutho we-China Iron and Steel ibonisa ukuba kwi-2020, inzuzo yeenkampani zentsimbi ezibandakanyiweyo kwizibalo eziphambili ziye zanda unyaka nonyaka ukusukela ngoJuni, kwaye umlinganiso woxanduva lweasethi uqhubekile nokuhla unyaka nonyaka. Inzuzo iyonke efumaneka kunyaka wonke igcine ukukhula.
"Kunyaka ophelileyo, ukuvuselelwa okuqhubekayo koqoqosho lwase China kuye kwaqhuba ishishini lesinyithi ukuba lidlule kulindelo." U-Luo Tiejun uthe, "Enye into ebalulekileyo luhlaziyo lolwakhiwo kwicala lokubonelela. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iinkampani zentsimbi zenze imali kwaye imeko yeemali zayo iphucuke kakhulu. ”
U-Luo Tiejun ukholelwa ukuba ishishini lesinyithi libonakalise amandla okulwa umngcipheko ngenxa yokuqhubela phambili okungagungqiyo kohlaziyo lolwakhiwo kunye noncedo olupheleleyo lweshishini eliqokelelwe kule minyaka idlulileyo.
Ezi zibonelelo ziya kuqinisekiswa ngo-2020 xa ubhubhane wehlabathi usasazeka. Kwi-2020, kwelinye icala, ishishini lesinyithi lelizwe lam lidlale indima ebalulekileyo kunikezelo olungxamisekileyo, uncedo lwezonyango, ukuqala kwakhona komsebenzi kunye nemveliso, kunye nozinzo kwityathanga lokubonelela ngemveliso; Kwelinye icala, ibango kunye nomthamo wemveliso kwishishini lesinyithi lase China zombini zishicilele phezulu ngaxeshanye, oko kukhokelele kukonyuka okukhulu kokungeniswa kwentsimbi, kunye nokungeniswa okunezigaba kwentsimbi ekrwada kuye kwaqala ukubakho ukusukela ngoJuni.
"Njengelona lizwe likhulu elivelisa intsimbi, i-China ayibekanga uxinzelelo kuphela kwimveliso yehlabathi, kodwa ibonelele ngentengiso ebanzi yokwetyisa amandla emveliso yentsimbi," utshilo uLuo Tiejun.
Xa ndijonga emva kowama-2020 omangalisayo, imveliso yentsimbi yelizwe lam iqhubekile ukubaleka kwinqanaba eliphezulu iqhutywa yimfuno ezinamandla ezantsi, ibonisa ukomelela okuqinileyo kuqoqosho lwelizwe lam; Kwangelo xesha, ixabiso lesinyithi elithengwe kwamanye amazwe lahla kakhulu, laphinda labetha kwiindawo zentlungu zeshishini. Uvuyo kunye namaxhala eshishini lesinyithi kunye nentsimbi zizinto nje zokungena kwelizwe lam kwinqanaba elitsha lophuhliso kunye neenguqulelo ezintsha kumathuba nakwimingeni.
Ukuma kwindawo yokuqala entsha "yesiCwangciso seMinyaka emiHlanu ye-14", ingaba ishishini lesinyithi lingenza njani ukusilela kwaye lenze isiqalo esihle?
U-Luo Tiejun uvakalise ukuba amandla okwandiswa kwamandla, ukunyanzelwa kokuxinana kwendalo, ukuxhomekeka okuphezulu kwimithombo yangaphandle, kunye noxinzelelo lwemboni ephantsi iya kuhlala iyimingeni ejongene nomzi mveliso wentsimbi kangangexesha elizayo. "Umzi mveliso wentsimbi usenazo iziphene ekufuneka uzenzile ekukhawuleziseni ulwakhiwo lwenkqubo yokwenziwa kwesiseko soshishino kunye nokwakha ikhonkco lezamashishini langoku."
Ukwandisa ubume bemizi-mveliso kubaluleke kakhulu ukudibanisa amandla esiseko soshishino. Ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zentsimbi, kwiminyaka yakutshanje, iinkampani zentsimbi zelizwe lam zithande ukukhula kunxweme. ” U-Luo Tiejun uthe, le yimeko yezibuko lendawo eselunxwemeni, iindleko zokwenza izinto, kunye neziqinisekiso zempahla eluhlaza Isiphumo esingenakuphepheka seenzuzo ezininzi ezinje ngobungakanani bendalo.
Kodwa ukwabonisa ukuba ukwenziwa kakuhle kwemizi-mveliso yentsimbi kunye nentsimbi ayinakho "ukurhintyelwa." Umgca ophindwe kabini kufuneka ube yindawo yokufuna imarike yommandla kunye nobutyebi kunye nobungakanani bendalo esingqongileyo, kwaye ulungelelwaniso lobume bebonke bemveliso kufuneka luqwalaselwe ngokusekwe ekubeni ukunyuka nokuhla komxokelelwano wemizi-mveliso kunganxulumana ngokupheleleyo.
"Umzi mveliso wentsimbi kufuneka utshintshe imeko yesiko lokuzanelisa, unciphise ukuthunyelwa kweemveliso ngokubanzi, ukhuthaze ukungeniswa kweemveliso zentsimbi eziphambili ezinje ngeebhilithi, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nentsimbi." U-Luo Tiejun uthe ishishini lesinyithi liya kulwenza nzulu uhlengahlengiso kwicala lokubonelela kwaye ngokuqinileyo licinezele ukunciphisa. Amandla emveliso yentsimbi ekrwada, ukutyala okunzulu kwendlela eluhlaza kunye nekhabhoni ephantsi, ekhokelela kunikezelo olutsha lwasekhaya kunye nemfuno eseleyo yokubonelela ngomgangatho ophezulu, kunye nokuthatha inxaxheba kwinqanaba eliphezulu lentsebenziswano kunye nokhuphiswano.
U-Luo Tiejun uthe ngokuziswa kuthotho lwemigaqo-nkqubo enxulumene noko kunye nokuphuculwa kwenkqubo njengokutshintshwa kwesikhundla, ukungeniswa kwempahla ekrwada yensimbi, kunye nokuthambisa ikhabhoni, ishishini lesinyithi kunye nentsimbi kufuneka lisebenzise iindlela zokukhuthaza ukudityaniswa kunye nokulungelelaniswa kunye nokuphucula Ukurisayikilisha kwenkqubo yezixhobo ezilahliweyo zentsimbi ukuhambisa ngokusesikweni imimandla engaselunxwemeni nakwimida yangaphakathi. Amandla emveliso, ngokuthe chu ukukhuthaza intsebenziswano amandla emveliso kumazwe, ngokuthe ngcembe ukuphucula izakhono ezisisiseko kushishino kunye nokuphucula inqanaba mveliso, kwaye usebenzise ezintsha yenzululwazi kunye nobuchwepheshe njengamandla ebalulekileyo ukuphucula umgangatho kunye kwinqanaba lonikezelo, ukuze intsimbi elungileyo inokusetyenziswa njenge "blade".
Ukujongana nekamva, yintoni "iblade" kumzi mveliso wentsimbi?
U-Luo Tiejun uthe kuyafuneka ukuba kuthathwe amathuba ngokusekwe kwisicwangciso-qhinga sokwandisa iimfuno zasekhaya. Ngophuhliso olunamandla lwe-Intanethi ye-5G + ye-Intanethi, utyalomali lwelizwe lam kwiziseko zophuhliso ezintsha kunye nokuqhubela phambili ukuvelisa kuyaqhubeka ukwanda, okuqhubekayo ukufaka inkuthazo entsha kuphuculo lweemfuno zentsimbi kumzi mveliso wentsimbi esezantsi njengeemoto, izixhobo zasekhaya kunye neemveliso ezifanelekileyo.
"Ukudityaniswa nokulungelelaniswa kwakhona kweentambo zenyusa umfula kunye nezantsi yimfuno entsha yeshishini leentsimbi ukuze liqonde ukukhula kolu shishino phantsi kwenkqubo entsha yophuhliso." U-Luo Tiejun ugxininise ukuba kubalulekile ukukhawulezisa ukudityaniswa kunye nokulungelelaniswa kwakhona ngaphakathi kolu shishino, kwaye uqhubeke nokukhuthaza intsebenziswano kunye namashishini asezantsi naphantsi kwishishini ukomeleza amashishini asezantsi kunye namaziko ophando asebenzisanayo ukwenza izinto ezintsha ukuhlangabezana nokwanda okutsha iimfuno zabasebenzisi kwaye bandise kwaye bomeleze ikhonkco loshishino.
Uthe "i-Belt and Road Initiative" ikhokelela kwinqanaba eliphezulu lokuvula, kwaye ikwazisa namathuba amatsha kwiinkampani zentsimbi ukuba "ziye kwihlabathi liphela". Umzi mveliso wentsimbi uneempawu zokuqina kotyalo-mali oluphezulu kunye nokufaneleka okunamandla kwimizi-mveliso, kwaye yinto ethatha inxaxheba ebalulekileyo ekwakhiweni komgangatho ophezulu ngokudibeneyo we "Belt and Road".
"Intsebenziswano yamazwe aphesheya yenye yeendlela ezibalulekileyo zeshishini lase China lokufuna inguqu kunye nokuphuculwa." U-Luo Tiejun uthe iinkampani zentsimbi kufuneka zilazi ngokupheleleyo ithuba lokuphinda zibumbe kwakhona umzi-mveliso wehlabathi, kwaye kwangaxeshanye zivavanye ngokusesikweni indawo yokusebenzisana kwezizwe ngezizwe, yonyuse ulungelelwaniso nentsebenziswano, ichonge indawo yokuBambisana, yomeleze ukuthintela umngcipheko, kwaye izame ukudala Amancedo amatsha okhuphiswano lwamazwe aphesheya kunye nenqanaba eliphezulu lokusebenzisana kwamandla emveliso.